Pragha Egwu Egwuregwu: Egwuregwu ngwa ngwa emere GTk | Site na Linux
Ọ bụrụ na e nwere ihe n'ekpere na ụwa nke free software bụ multimedia Player, oge a anyị na-eweta a Player mere na GTk akpọ Pragha Egwu Egwu Ọ nwere kensinammuo interface na e ji ya ala oriri nke ihe onwunwe.
1 Gịnị bụ Pragha Music Player?
2 Olee otú wụnye Pragha Music Player?
Gịnị bụ Pragha Music Player?
Ọ bụ elu na fechaa emeghe player ọkpụkpọ, mepụtara site na iji asụsụ C, sqlite na GTk, nke nwere atụmatụ na-enye gị ohere ịnụ ụtọ ọkpụkpọ zuru oke na-enweghị iri ọtụtụ akụ na kọmputa gị.
Onye ọkpụkpọ ahụ na-arụkọ ọrụ nke ọma na gburugburu desktọọpụ Gnome na Xfce, àjà a n'ọbá akwụkwọ management dabeere na mkpado na nchekwa Ọdịdị, ọ na-nwere nnọọ ihe bara uru song nzacha na-enye ohere ihe e kere eke nke ọtụtụ listi ọkpụkpọ.
Nke a Player mere na GTk na-enye gị ohere igwu ma dezie faịlụ ọdịyo na mp3, m4a, ogg, flac, asf, wma, na ụdị ape, na mgbakwunye ịgụ listi ọkpụkpọ na M3U, PLS, XSPF na WAX.
Ihe ọkpụkpọ ahụ nwere ọkwa desktọọpụ nke ala, njikwa usoro iwu ma nwee ike ịgbatị atụmatụ ya maka plugins. N'otu aka ahụ, a kwadebere ya na interface a na-ejighị n'aka na-enwe mmetụta dị egwu, nke na-eme ka ọ bụrụ ezigbo ọkpụkpọ maka ụdị kọmputa ọ bụla.
Nke a ọkpụkpọ nwere ogologo akụkọ ihe mere eme nke mmepe na wepụtara, ọ bụ ugbu a na mbipute 1.3.9 ma nwee mmalite ya Onye egwu consonance. Kemgbe ọ malitere ruo ugbu a, ọ jigidela usoro mmepe iji nye atụmatụ ndị dị mkpa na-enweghị iri ọtụtụ akụ.
Olee otú wụnye Pragha Music Player?
Tupu ịwụnye Pragha Music Player anyị ga-agba mbọ hụ na anyị nwere ndị a dependencies arụnyere:
grás-1.0> = 1.0, grider-isi-1.0> = 1.0
Mgbe ahụ, anyị ga-ebudata nsụgharị kachasị ọhụrụ dị na wepụtara peeji, ugbu a ọ bụ mbipute 1.3.90 na mgbe ahụ anyị nwere ike iso usoro nke Nkuzi: Wụnye .tar.gz na .tar.bz2 nke ahụ ga-enyere anyị aka na usoro nrụnye niile.
Ozugbo etinyere anyị, anyị nwere ike ịmalite ịnwe ọmarịcha ọkpụkpọ egwu ejiri GTk mee nke na-enye anyị njirimara ndị dị mkpa iji nwee ọ enjoyụ na ntanetị anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Pragha Music Player: Ngwa ngwa ngwa mere GTk
enweghị usoro egwu egwu ọ bụla, naanị egwu: c
Kedu ihe kpatara ọtụtụ ndị egwuregwu anaghị enwe nhọrọ ahụ? Anọ m na-achọ onye nnọchi maka guayadeque (nke ihe niile yiri ka ọ na-egosi anwụ anwụworị) mana nke ahụ dị mma n'anya karịa anụ nwụrụ anwụ ma ghara iri ọtụtụ akụ (na mgbakwunye bloat) dị ka clementine .. mana albums na-enweghị atụ bụ njirimara nke ahụ enweghị ike ị efu. ị maara nke ọ bụla?